असल कर्म र इच्छा शक्तिले देश बन्छ
राजकरण महतो शुक्रवार, बैशाख १, २०७४ 140358 पटक पढिएको
पुस्तौंदेखि पीडा सहेर बस्दै आएका महोत्तरी बर्दिबासका ५५ घर परिवारलाई लक्षित गरी बनाइएको एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती वैशाख १ मा हस्तान्तरण हुँदै छ । बस्तीमा बसोवास गर्ने मुसहरहरू दंग छन् । सहयोग संकलन गरी धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले तीन महिनामा एउटा बस्ती नै तयार पारी हस्तान्तरणको चरणमा पुर्‍याउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, अन्नपूर्णकर्मी राजकरण महतोले मुसहर बस्ती निर्माणमा केन्द्रित रही उहाँहरूसँग गरेको कुराकानीको अंशः
नयाँ वर्षको पहिलो दिन मुसहर बस्ती हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ । कस्तो लागेको छ ?
धुर्मुसः आज हाम्रा लागि अत्यन्तै खुशीको दिन हो । मुसहर बस्ती निर्माणसँगै आज एकीकृत बस्ती विकासको हामी ह्याट्रिक पार गर्दै छौं । मुसहर समुदायमा हाँसो, खुसी छर्छौं भन्ने सपना साकार भएको दिन हो आज । पुस २५ मा एकीकृत बस्ती शिलान्यासका दिन वैशाख १ नयाँ वर्षका दिन हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेका थियौं, त्यो वाचा पूरा गरेका छौं । हामी चाहन्छौं- सबैले यसैगरी आफ्ना वाचा पूरा गरौं ।
सुन्तलीः मुसहर बस्ती हस्तान्तरणको यो दिनले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र मानवताको सन्देश दिने ठानेको छु । अन्य स्थानमा बस्ती बनाएर सेवा प्रदान गरेका थियौं । मुसहर बस्ती बनाएर धर्म (पुण्य) प्राप्त भएको भान भएको छ । मुसहर बस्तीले हामीलाई एकसूत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ । यो सफलता हाम्रो मात्रै होइन तीन करोड नेपालीको हो ।
तपाईंहरूले सुनेको मुसहरबस्ती नजिकै बसेर नियाल्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
धुर्मुसः पिछडिएको मुसहर समुदाय सोझो, मिलनसार र मेहनती छ । उनीहरूमा मानवीय भावना छ । मुसहरहरूले दिलोज्यान दिएर बस्तीमा काम गरे । मुसहरहरू धर्तीपुत्र रहेको हामीले महसुस गर्‍यौं । पत्रकार र कलाकारको संयुक्त प्रयासले ल्याएको आमूल परिवर्तन हो, यो एकीकृत नमुना बस्ती ।
सुन्तलीः मुसहरहरू पीडामा रहेको सुन्यौं । संगत गर्दा मुसहरहरू पीडितमा नै रहेको पायौं । गरिबी, अशिक्षा, र बेरोजगारीभित्र पीडा रहेको हामीले पायौं । मुसहर बस्ती परिवर्तन गर्न विभिन्न संघसंस्थाले पनि काम गरेको सुन्यौं । हामीले काम सुरु गर्दा धेरैले भन्नुभयो ख्याल गर्नु तपाईंहरू असफल हुनुहोला । हिजो सबैको सहयोग नहुँदा बस्ती राम्रो भएन ।
हामीले बस्ती बनाउँदा सबैको सहयोग पायौं । बस्तीमा आज वास छ । भोलि राम्रो गाँस, शिक्षा र रोजगारीले मात्र बस्ती राम्रो बन्छ । त्यसैले यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । बस्तीभित्रका मानिसहरूको मन स्वच्छ बनाउन जरुरी छ । घर जिन्दगीभरको सपना हो । यस किसिमको घरमा बस्ने यहाँका मुसहर दाजुभाइ दिदीबहिनीको सपना सायदै पूरा हुन्थ्यो । हाम्रो प्रयत्न, सहयोगी मनहरूको साथ र उहाँहरूको लगनशीलताले घर बनेको छ ।
पहाडको मान्छे कसरी मुसहर बस्तीमा पस्नुभयो ?
धुर्मुसः पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सफाइका क्रममा गत वर्ष पुस १३ गते यहाँ पाइला टेकेका थियौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुस ९ देखि १७ सम्म सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको थियो र त्यसै क्रममा हामी पुस १३ गते यहाँ आइपुगेका थियौं ।
मुसहर बस्ती निर्माणमा कसरी जुट्नुभयो ?
धुर्मुसः बस्तीमा आइपुग्दा हाम्रा आँखा साँच्चिकै रसाएका थिए । रोग, भोक र शोकमात्र होइन, पुस्तैनी दुःख र अभावको जाँतोमा पिसिइरहेका दीनहीन मुसहर समुदायको दुरवस्थाले हामीलाई छटपटी भएको थियो । हाम्रो हृदय कटकटी खाएको थियो । बस्तीमा बालविवाह चरम थियो । पोषणयुक्त आहारको अभावमा बालबच्चाहरू कुपोषणको सिकार थिए । बालबच्चाको भरणपोषण, रेखदेख गर्नुपर्छ भन्ने चेतना थिएन । पुसमा शीत तपतपी चुहिने घर, ओढ्ने ओछ्याउने थिएन । रोगी, सुत्केरीहरू पराल ओछ्याएर सुतिरहेका । कठ्यांग्रिइरहेका । हृदयविदारक अवस्था थियो । बच्चाबच्चाहरू कोही पनि विद्यालय जाँदैनथे । यी दृश्यले हामीलाई निकै भावुक बनायो ।
सुन्तलीः अभावै अभावमा रहेका मुसहरसँग धुर्मुस-सुन्तली थिए । अरू देशमा खान नपाएको, लगाउन नलाएको सुत्न घर नभएको जस्ता थुप्रै समस्या सुनेका थियौं, मुसहर बस्ती पस्दा यस्तै समस्या पायौं ।
बस्तीमा आएपछि पहिला के गर्नुभयो ?
धुर्मुसः मुसहर बस्तीमा हाम्री आएपछि गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्‍यौं । शीतलहरबाट बचाउन न्यानो बाँड्यौं । आज सिंगो बस्तीको मुहार फेर्‍यौँ।
सुन्तलीः हाम्रो प्रेरणा र स्कूलका शिक्षक शिक्षिकाको माया पाएर अहिले सबै केटाकेटीहरू विद्यालय जान्छन् । कपीकलम र ड्रेससहित विद्यालय जाँदा हाम्रो मन खुसीले पुलकित छ । ती भीडमा हामी हाम्रै छोरी भेटाउँछौँ । तीनवर्षे काखेछोरी, जसले मेरो उपनाम मात्रै जान्दछिन्- धुर्मुस्बाबा । उनलाई छाडेर समग्र बालबालिकासहितको खुसी खोज्न आएको सार्थक भएको भान हुन्छ हामीलाई ।
कसरी बस्ती बनाउन आँट गर्नुभयो ?
सुन्तलीः सुनेको, देखेको र भोगेको कुरामा फरक पायौं । परैबाट भन्ने तर नआँट्ने । हामीलाई सरसफाइका बेला आन्दोलनकारीले पनि सहयोग गरेका थिए । त्यति बेला मधेसमा आगो बलेको थियो । काम गर्न सजिलो कहाँ छ र । सबै ठाउँमा गाह्रो छ । गाह्रो भएकै ठाउँमा काम गर्न मजा आउँछ । मानवता र सद्भावका लागि हामी तराई झर्‍यौं । तराई पनि हाम्रो नेपाल हो भनेर दिल खोलेर तराई झर्‍यौं । हामीले हिमाली सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्‍यौं ।
पहाडी जिल्ला काभ्रेको डाँडा गाउँमा एकीकृत नमुना पहरी बस्ती बनायौं । अहिले तराई-मधेसमा एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माण गर्‍यौं । हो, अब हामी गर्वका साथ भन्छौं- एकीकृत बस्ती निर्माणमा हामीले ह्याट्रिक पूरा गर्‍यौं । मात्रै तीन महिनामा मुसहर बस्ती बनायौं । छियाछिया भएका मनलाई एक बनायौँ । समग्रमा हिमाल-पहाड-तराईलाई सद्भावको एउटै सूत्रमा उन्यौं । रकेटको स्पिडमा काम गर्नुपर्छ, अनिमात्र देश बन्छ । हाम्रो मूलभाव यही हो ।
धुर्मुसः स्वच्छ काम गर्नेहरूलाई जहाँ पनि सफलता मिल्छ । आजको सन्दर्भमा वचनले मात्रै सद्भाव वृद्धि गर्न सक्दैन । आश्वासनका दाउराले मात्रै चुल्हो तात्दैन । व्यथाको घाउ वचनले मात्रै निको हुँदैन । भित्रैदेखि दत्तचित्त भएर कर्ममा होमिनुपर्छ । त्यसैले त ठडियो एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती । विविध भाषाभाषी, जातजाति, समुदाय र सम्प्रयादको सुयोग्य फूलबारी हो नेपाल । एक आपसलाई तोडेर होइन जोडेर मात्रै समुन्नतिको राजमार्ग खडा गर्न सकिन्छ । एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती मधेस विकासको आधाशिला मात्रै होइन, देश निर्माणको प्रक्रिया पनि हो ।
कलाकार मान्छे तपाईंहरू कसरी समाज सेवामा लाग्नुभयो ?
सुन्तलीः यो पनि हसाउने काम नै हो । जसरी पनि हसाउनै पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । भूकम्पपीडितको हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भूकम्पले नै पाठ सिकायो । नेपालीले साथ दिनुभयो र हामी समाज सेवामा लाग्यौं ।
धुर्मुसः जब देशमा भुइँचालो गयो । मानिसहरू दुःखमा परे । उनीहरूको सहयोगी बन्नुपर्छ भन्दै हामी एकीकृत बस्ती विकासमा लाग्यौं । हामीलाई मुख्यतः भूकम्पले नै पाठ सिकायो ।
मुसहर बस्ती नै किन रोज्नुभयो ?
धुर्मुसः भूकम्पपीडितका लागि दुईवटा बस्ती बनायौं । दुई वर्षदेखि भूकम्पपीडितहरू पीडामै छन् र मुसहरहरू वर्षौंदेखि पीडित थिए । त्यही भएर हिमाल, पहाड र तराईलाई एकताको सन्देश सामाजिक सद्भावको सन्देश लिएर तराई झर्‍यौं ।
सुन्तलीः जहाँ दिनहुँ भुइँचालो गइरहेको थियो । कसैले पत्तै पाउँदैनथ्यो । मानवता सद्भाव र विकासको दृष्टिकोणले विकास गर्न मुसहर बस्ती रोज्यौं । त्यहीमाथि छिछि दूरदूरको अवस्था थियो मुसहरहरूलाई । त्यो चिर्न हामी तराई झर्‍यौं ।
धुर्मुस सुन्तली राजनीतिमा लाग्न देशभरि विकास गरे मान्छे आकर्षित गर्न लागेको छ भन्ने कुरा छन् ।साँचो कुराचाहिँ के हो ?
धुर्मुसः अहिले नै यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । अहिले देश र जनताका लागि काम गर्ने बेला छ । निःस्वार्थ भावनाले अघि बढेका छौं ।
सुन्तलीः राजनीति आफैंमा नराम्रो कुरो होइन । यसलाई स्वार्थी व्यक्तिहरूले नखेलिने खेल खेलेर राजनीतिको महत्वलाई कमजोर बनाएका हुन् । हरेक ठाउँमा राजनीति हुन्छ । त्यसबाट हामी टाढा बस्न सक्दैनौं । कुनै व्यक्ति पार्टीले देश परिवर्तन गर्न अघि बढ्यो भने सहयोग र समर्थन गर्छु । राजनीति देश र जनताका लागि गर्ने चिज हो तर नेताहरूले आफ्ना लागि मात्र राजनीति गरे । देश र जनताले मागे राजनीति गर्न एकपटक सोच्छु।
अन्तमा तपाईंहरू के भन्नुहुन्छ ?
धुर्मुसः नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू तथा सहयोगी मनहरू हाम्रा लागि भगवान् हुन् । तीनवटा बस्ती बनाउन जसले तनमनधनले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई लाखौं धन्यवाद । तोकेकै समयमा देशमा चुनाव होस् । गाउँमा सरकार पुगेको नागरिकले महसुस गरोस् । हाम्रो भन्दा राम्रो मान्छे चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि बनेर आऊन् । देशमा विकासको लहर ल्याउन, त्यो सुखद वर्ष बनोस् २०७४ साल ।
देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना । एकीकृत विकासकै अवधारणाले देश बन्छ । यदी हामी साँच्चिकै देश बनाउँछौँ भनेर लाग्छौँ भने एकीकृत बस्ती विकास गर्नैपर्छ । देश रेडिमेड भाषणले बन्दैन । असल कर्म र इच्छाशक्तिले मात्रै बन्छ । देश शक्ति, पैसा र पावरले बन्ने होइन, टाइमिङको आवरले बन्ने हो । आन्दोलन र भाषणले मात्रै मुलुक बन्दैन, सुशासनले बन्ने हो । स्पष्ट रोडम्याप र विकासको खाका चाहिन्छ देश बन्न ।
बालमैत्री, अपांगतामैत्री, वातावरणमैत्री, संरचना कागजमा लेखिएर हुँदैन । त्यो पूर्वाधारको विकासका लागि पनि बस्ती एकीकृत नै हुनुपर्छ । अर्को, हामीले समतामूलक समाजको धेरै कुरा गर्‍यौं । साम्यवादको पाठ पनि पढ्यौं । यही हो समानुपातिक, साम्यवाद, समावेशीको उदाहरण । कसैका घर कसैभन्दा कम छैनन् । समान छन् । एकनासे छन् । सबैका बालबालिका एकैठाउँमा खेल्छन्, रमाउँछन् । कुनै बालबालिकाले उँचनिच महसुस गर्नुपर्दैन । बालबालिकाको वृद्धि विकासको दरिलो आधार पनि यही हो ।
सुन्तलीः नववर्षको सम्पूर्णलाई शुभकामना । सम्पूर्ण नेपालीको जीवन सुखमय बनोस् । देशको काँचुली फेरियोस् । २०७४ सालमा देश विकास भएको हेर्ने चाहना छ । एक अर्काप्रति सकारात्मक सोच विकास होस् । साँच्चै नै देश निर्माण भएको हेर्ने चाहना छ । देश विकासका लागि एक भएर बढौं । जागौं, लम्कौं, चम्कौं, नयाँ वर्षको शुभकामना छ ।